Cabbirka B5: waxa uu yahay, sifooyinka iyo noocyada kala duwan ee cabbirada iyo qaababka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 20/04/2022 13:06 | La cusboonaysiiyay 22/04/2022 13:31 | Design Graphic
Warqaddu waa mid ka mid ah walxaha aasaasiga ah ee weligood jiray, haddaynu ka hadlayno daabacaadda, farshaxanka garaafyada ama sawir-farshaxaneedka. Ma aha oo kaliya inaan xoogga saarno wax kasta oo ka kooban bog fudud ama warqad, laakiin sidoo kale qaybo dhan oo muuqaal ah oo ka dhigaya mid u shaqeynaya wax kasta oo aan isticmaalno.
Maqaalkan, waxaan u nimid inaan si qoto dheer ugu sii baarno sifooyinkaas, gaar ahaan haddii aan ka hadalno cabbirrada iyo cabbirrada. Laakiin waxaa jira cabbir inta badan ka duwan inta kale maadaama aan si aad ah looga hadlin oo aan laga aqoon dad badan oo badan, cabbirka b5.
Haddi yoolkaagu yahay inaad wax badan ka ogaato mawduucan, nala joog ilaa dhamaadka boostada.
1 Warqad ku socota qaabka B5: waa maxay
2 Qaababka kale ee waraaqaha
2.1 Qaabka A0
2.2 Qaabka A1 (594 X 841)
2.3 Qaabka A2 (420 x 594)
2.4 Cabbirka A3 (297 x 420)
2.5 Cabbirka A4 (210 x 297)
2.6 Cabbirka A5 (148 x 210)
2.7 Cabbirka A6 (105 x 148)
2.8 Cabbirka A7 (74 x 105)
2.9 Cabbirka A8 (52 x 74)
Warqad ku socota qaabka B5: waa maxay
Qaabka B5 Waa nooc waraaqo ah oo cabbiradiisu ay ku jiraan una dhexeeyaan inta u dhaxaysa 178 x 250 mm, iinji ahaan waxay u dhigantaa wadar ahaan 6,9 x 9,8 inches. Waa cabbir aan si caadi ah loo mahadin maadaama ay aad u yar tahay. Si aad si ka sii fiican u fahamto, waa cabbir ku habboon akhrinta buugaagta, buugta sawiridda, ajendaha, xusuus qorka, iwm. Sidaa darteed, aad ayaa loogu baahan yahay daabacaadda, maadaama lagu daabacay tiro badan.
Qaabkan waxa lagu dhex qoray taxanaha B ee dhammaan cabbiraadaha ka jira warqadda. Iyada oo qayb ka ah taxanaha B, waxaa la fahamsan yahay inay sidoo kale qayb ka tahay heerka ISO 216. Marka la soo koobo, waa qaab loo qaabeeyey in uu u shaqeeyo si yar oo yar. Waxa ugu caansan qaabkani waa in uu caadi ahaan si fiican u shaqeeyo, kaas oo u oggolaanaya dadweynaha in ay u isticmaalaan ujeedooyin iyo ujeedooyin kala duwan. Waa qaab warqad ah oo aadan ka daali doonin shaqada iyo fulinta hawlo kala duwan.
cabbirka B5 Waxay la mid tahay xajmiyada kale ee waraaqaha, kuwaas oo ka bilaabma B1, B2, B3, B4 iyo B5. Waxaa jira cabbirro kale oo ku jira qaab isku mid ah, si kastaba ha ahaatee, cabbirada aan helno way ku kala duwan yihiin iyaga si ay u dhaliyaan habab cusub oo loo isticmaalo warqad.
Faahfaahin kale oo mudan in la tixgeliyo ayaa ah shaki la'aan isticmaalka yar ee daabacaadda iyo isticmaalka sare ee daabacaadda ama naqshadeynta tifaftirka. Waa qaab si fiican ula noolaa qaybaha kale ee nashqada waana shay sifo badan u leh.
Ugu dambeyntii, waa in lagu daraa in ay tahay qaab laga heli karo dukaamada waraaqaha kala duwan, oo ay ku jiraan barnaamijyo badan oo prepress ah, waxay mar hore la jaanqaadeen qaabab kasta si aad kaliya u habayso dukumeentiga oo aad si toos ah u daabacdo. Waad ku mahadsan tahay tignoolajiyadan cusub, ma aha wax aan macquul aheyn in lagu shaqeyn karo qaabab kala duwan oo naga caawiya inaan u fulino mashruucyadayada hab raaxo leh oo raaxo leh.
Sida aad awooday inaad u xaqiijiso, cabbirka B5 waa cabbir gaar ah oo aad loogu sifeeyay qaababka kale ee ku xeeran. Marka xigta, waxaan ka hadli doonaa qaabab kale oo badan oo jira iyo qaar ka mid ah hawlahooda muhiimka ah.
Qaababka kale ee waraaqaha
Habka A0 waa qaab loo tixgeliyo qaabka hooyada. Kuwaas oo kala ah, Waa halbeegga salka ku haya inta soo hartay noocyada kala duwan ee jira oo aan ognahay inay dhashaan ama ka bilowdaan. Sidaa darteed waa tan ugu weyn iyo tan ka shaqeysa warshado badan oo xirfad leh.
Taasi waa in la yiraahdo, qaybaha sida naqshadeynta ama daabacaadda hore waxay u muuqdaan inay isticmaalaan waxoogaa yar, maadaama ay aad u weyn yihiin, sidaas darteed, waxay noo ogolaanayaan hab shaqo oo raaxo leh oo hufan, marka ay timaado fulinta mashaariicdayada.
Qaabka A1 (594X841)
Waa qaab, jaleecada hore, u ekaan karto mid la mid ah tii hore, laakiin waxay ilaalinaysaa sifooyin kale marka la eego cabbirkiisa maadaama uu xoogaa yar yahay. Si kastaba ha ahaatee, aad bay u weyn tahay waxaana inta badan loo isticmaalaa adeegsiyo ama ujeedooyin kala duwan, gaar ahaan sawir-gacmeedka, boodhadhka, boodhadhka ama wax kasta oo taageero ah ama dhexdhexaadin xayeysiis ah oo u baahan cabbir weyn.
Marka la soo koobo, qaabka A1, Haa, waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan daabacaadda iyo midka sida caadiga ah ka sarreeya inta kale, maaddaama cabbirkeeda weyni u oggolaanayo mashruucyo muhiimad weyn leh iyo muuqaal.
Qaabka A2 (420 x 594)
Qaabka A2 waxa lagu gartaa inuu yahay kala badh qaabkii hore. Waa nooc waraaqo ah oo inta badan aad loogu mahad celiyo mawduucyada sida boodhadhka, sawir qaadista, naqshadaynta, jadwaladaha ama fareemooyinka qaarkood lagu sameeyay sawir-qaadista dhijitaalka ah. Waa mid ka mid ah qaababka inta badan la isticmaalo waxayna noqon kartaa mid faa'iido leh haddii aad u baahan tahay inaad ku naqshadeyso cabbirro iyo cabbirro aad u ballaaran oo ballaaran. Marka la soo koobo, la yaab leh dhammaan kuwa jecel in ay u shaqeeyaan si weyn oo aan u oggolaan in yar ama daqiiqado cabbir.
Qiyaasta A3 (297 x 420)
Waa mid ka mid ah qaababka maanta sida ugu wanaagsan ula qabsanaya daabacaadda. qaabkan, Oo ay la socdaan kuwa kale sida qaabka A4, waa kuwa ugu badan ee la arko iyo kuwa ugu badan ee metelaya dukaamo badan oo nuqul ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu daabaco sawirada sawirada, maadaama ay tahay qaab ku haboon in loo isticmaalo sawirka. Waxa kale oo ay si fiican ugu shaqeysaa garaafyada, naqshadeynta, sawir qaadista, majaladaha, dibloomada qaarkood iwm. Waa cabbir inta badan lagu go'aamiyo isticmaalkeeda gaarka ah. Marka la soo koobo, waxaad ka heli kartaa bakhaar kasta ama dukaanka waraaqaha iyo tiro badan oo xirmo ah.
Qiyaasta A4 (210 x 297)
Dhab ahaantii waa xajmiga dhabta ah ee folio. HAA markaad akhrinayso, waa cabbirka dhammaan bogagga aan inta badan guriga ku haysanno si aan u qorno ama ula shaqeyno. Waa cabbirka ugu caansan iyo kan ugu badan ee la isticmaalo. Dhammaanteen waxaan isticmaalnay folio mar nolosheenna ah. Caadi ahaan waa la adeegsadaa oo aad bay u badan tahay in lagu arko joornaalada, buugaagta xusuus-qorka, buugaagta xusuus-qorka ee dugsiga oo aad ku qabsan karto shaqada gurigaaga, qandaraasyada shaqada oo aad saxiixdo mushaharkaaga ugu horreeya, iwm. Adeegsi aan dhammaad lahayn oo aad ka heli karto kumanaan dukaanno ama dukaanno ah.
Qiyaasta A5 (148 x 210)
Cabbirka A5 waxaa lagu gartaa inuu ka yar yahay cabbirka la aasaasay, kaas oo ah A4. Waa qaabka caadiga ah ee buug-yaraha caanka ah ee aan dhammaanteen haysanay mar uun, ama shaqada ama guriga, laakiin had iyo jeer waxaan haysanaa mid gacanta ku qoran si aan u qorno waxa lagama maarmaanka ah iyo muhiimka ah. Si aad si fiican u fahamto, waa nooca warqadda aad ku qorayso kaliya kuwa aad u baahan tahay. Warqad cabbir yar oo aad ka heli karto labadaba buug-yaraha, sida joornaalada ama noocyada kale ee warbaahinta. Waa qaab aad u raaxo leh haddii laguu bartay inaad ku shaqeyso qaabab yaryar.
Qiyaasta A6 (105 x 148)
Shaki la'aan waa mid ka mid ah cabbirrada ugu yar ee halkaas ka jira. Waad garan doontaa maadaama ay marar badan ka soo muuqato kaararka kirismaska ​​ama salaanta. Waa qaab aan inta badan ku shaqayno ama u isticmaalno si joogto ah. Si aad si ka sii fiican u fahamto, waa warqadda xusuus qorka yar laakiin ka sii heersan ee aan inta badan ku hayno baabuurka ama guriga si aan u qorno liiska wax iibsiga. Cabbir si weyn loo adeegsaday oo faa'iido badan u leh samaynta qoraallo degdeg ah oo aan u baahnayn shaqo badan.
Qiyaasta A7 (74 x 105)
Haddii qaabkii hore ay kuugu muuqato qaab aad loo dhimay oo yar, qaabkani waa kala badh ka yar kii hore. Habka A7 waxaa si gaar ah lagu gartaa in lagu matalo warbaahinta kala duwan sida jadwalka jeebka. Waxa kale oo inta badan lagu arkaa buug-yaraha xayaysiisyada ama kaadhadhka salaanta. Shaki la'aan, waa qaab loo isticmaali karo ilo iyo warbaahin kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo suurtagal ah in loo isticmaalo ujeedooyin kale. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa dukaamada waraaqaha ama dukaamada kala duwan ee la mid ah.
Qiyaasta A8 (52 x 74)
Cabbirka A8 waa qaab aad u yar, aad u yar oo ku habboon jeebkaada ama xitaa boorsadaada. Caadi ahaan waxa ku jira kaadhadhka aad inta badan ku sidato boorsadaada, oo ay ku jiraan kuwa ugu gaarka ah sida aqoonsigaaga. Haddii aad tahay naqshadeeye oo aad u baahan tahay inaad u sameyso qaar ka mid ah kaararka ganacsiga astaantaada, ku qor cabbiradan suufkaaga cabbirka ee A7 oo billow ku naqshadeynta qaabkan caadiga ah. Waa qaab aad u adag in laga helo qaar ka mid ah dukaamada waraaqaha ama daabacadaha, laakiin waa suurtogal in laga helo boggaga internetka qaarkood.
Habka B5 waa qaab inta badan lagu garto cabbirkiisa. Qaababka waraaqaha waxaa loo qaabeeyey si ay si fiican u fahmaan qaar ka mid ah tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah isticmaalka saxda ah ee warqadda iyo hab aad u raaxo badan oo aad u shaqeyso iyo fikradaada.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay qaabkan gaarka ah iyo inaad xiiso u yeelatay inaad ogaato qaar ka mid ah cabbirada qaababka ugu jaan-goysa suuqa. Hadda waa wakhtigaaga si aad u doorato qaabka aad ugu shaqaynayso mashaariicdaada xiga ama isku day kuwa cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » cabbirka b5